Izindwangu Zisetha Ifektri - China Izinsimbi Zokusika Abakhiqizi nabahlinzeki
Ukusika kusho lukhulu ekubukekeni okuphelele kokuhlelwa kwetafula lakho, kungeza umoya omningi nokuzijabulisa kukho konke ukudla, kukhombisa isimo sengqondo ngempilo yethu ngisho nasemphakathini wonke. Izipho ezinhle ze-Shiny Inc., zinikela ngamasethi wokusika ahlukahlukene afaka imimese yensimbi engagqwali ephezulu, imfoloko, izinkezo, imicu ezokuhlala impilo yakho yonke, noma ukuthambekela kwakamuva nezitayela ezitsheni ze-PLA ezibolayo lokho kusiza umhlaba kube kusasa okucacile. Zonke izinto zivunyelwe yi-FDA, zilungele ikhaya nekhishi, kanye nendawo yokudlela nebha, isikole noma uhambo lwangaphandle kusuka ekukhetheni okuhle kwamasethi wokusika ahlanganisiwe. Iza ngezitayela ezahlukahlukene ukuze ukwazi ukuthola okufunayo, noma ngabe yimuphi umcimbi, futhi sinezinketho eziningi kuzo zonke izifundo. Ngalolu hlu oluhle ungalola itafula lakho ngesethi entsha yokusika e-SJJ, ukuqoshwa ngokwezifiso noma ilogo yokuphrinta yamukelwa ngokufudumele. Xhumana nathi manje ukufaka isitayela etafuleni lakho lesidlo sakusihlwa ngesethi yethu yokusika!
Izinkomishi Zokuphuza Zepulasitiki Ezivuselelekayo
I-Biodegradable Paper Drinking Straws
Engagqwali Cutlery Setha
Insimbi Engagqwali Ice Cube
Izitshalo ze-PLA ezibolayo
Izitezi Zensimbi Engagqwali
Ukolweni Wotshani Lunch Box, Izipuni Zamasethi